Indlela yokusebenzisa i-wax ngezipikili: izithombe namavidiyo. Izici zokusebenzisa i-wax ngezipikili.
I-Wax yezipikili: izici zesicelo
Izandla zowesifazane yikhadi lakhe lebhizinisi. Kufanele ngaso sonke isikhathi abe amahle, ngesikhumba esibucayi nezipikili ezihle. Ngendlela, kunesimo sezipikili ongatshela okuningi ngomuntu nangesimo sempilo yakhe. Kodwa ngaphezu kokuphila okunempilo nokudla okunempilo kufanelekile ukunakekelwa kahle ekunakekeleni kwabo. Kukhona imali eningi yalokhu, kodwa manje ngithanda ukukhuluma nge-wax, ecacile ngokumelene nesizinda sabanye.
I-Wax ingabuyisa ubuhle nokuqina kwizipikili. Ukunakekelwa njalo kuzokuqinisekisa ukubonakala kwabo okubonakalayo. Konke ngoba uyondla ngokucophelela ipuleti yama-nail ngezinto ezisebenzayo ezipholisa i-cuticle futhi zivikela izipikili ngenxa yethonya elibi lemvelo.
Ukuqiniswa kwezipikili nge-wax
I-Wax inezindawo zemilingo ngempela. It softly isikhumba sezandla, cuticles, uyakwazi ukunikeza izipikili ukukhanya namandla. Izakhiwo zayo ezilwa nokuvuvukala zivikela izandla kumonakalo futhi zibuyisela impilo yephalishi ye-nail. Konke lokhu kubangelwa izakhi zalo, ikakhulukazi i-provitamin A.
I-wax yokucwenga ilula kakhulu ukuyisebenzisa futhi ungayenza noma kuphi. Kuyinto into enhle kakhulu, evumayo, engashiyi amathanga futhi ayifake kalula. Ngendlela, kwezinye izimo, u-wax angafaka ngokugcwele esikhundleni ukhilimu wesandla.
Ungasebenzisa kanjani i-wax ngezipikili?
Inqubo ilula kakhulu, futhi ungenza i-wax ifihle wena ekhaya.
Okokuqala, zama ukuhlanza ipuleti ye-nail kahle.
Sishisa imbiza entendeni yesandla sakho.
Ukumboza ngendwangu encane yomunwe owodwa bese uphonsa kahle ikhambi. Yenza okufanayo nawo wonke ama-marigolds.
Polish isipikili esinama-bass. Kungcono ukusebenzisa i-suede ngalokhu.
Ngokusebenzisa i-wax njalo, ungakhohlwa nge-varnish isikhathi eside, njengoba inikeza izipikili ukukhanya okukhethekile. Ngakho-ke, uzothola i-manicure ecacile, kodwa ekhangayo kakhulu.
Ngosizo lwama-wax, ungathuthukisa kakhulu ukuvikelwa kwama-marigolds akho. Ukwenza lokhu, yenza amabhati ajwayelekile we-wax. Aba nomphumela onenzuzo hhayi kuphela epulatifini lezinsipho, kodwa nasemiphakathini yeminwe, okwenza babe nethenda ikakhulukazi. Ukwenza lokhu udinga:
Hlanganisa izipuni ezimbili ze-wax. Lokhu kufanele kwenziwe kuphela ekugezeni kwamanzi.
Phonsa iminwe yakho kuyo, yibambe kancane bese uyidweba.
Bamba i-wax eminwe yakho imizuzu engaba ngu-15.
Unama-caps amahle we-wax, okulula kakhulu ukususa ekupheleni kwenqubo.
Ekugezeni okunjalo ungangeza amafutha abalulekile. Isibonelo, ngosizo lwe-ylang-ylang, i-lemon ingashukumisa ukukhula kwezipikili. Okuzuzisa isimo sabo kuthinta u-vithamini A no-E. Uma unezimo eziphuthumayo nezipikili zidinga ukudla okunomsoco, engeza i-waxful we isipuni kunoma yikuphi amafutha: umnqumo, imifino, i-almond, njll. Phuza kule ngxube yeminwe bese ubamba imizuzu engu-15. Ngalesi sikhathi, gcoba ngokucophelela ingxube kwi-cuticle.
Ungakhetha kanjani i-wax emihle ngezipikili?
Uma ukhetha i-wax, qaphela njalo ukupakisha. Khumbula, udinga kuphela i-bexia yemvelo, futhi akuvamile ukuhlanganiswa ku-wrapper ekhanyayo, ekhwazayo. Kungcono ukusebenzisa umkhiqizo ohlanzekile, ngaphandle kwezithasiselo. Abakhiqizi abaningi bangezela kuwo amafutha ahlukahlukene amaminerali noma ezinye izinto. Uma ubanjwa, yibeke endaweni yayo.
Ukwakhiwa kwe-bex ehle yezipikili kungabandakanya kuphela amafutha nemifino. Ngezinye izikhathi ekubunjweni kungatholakala izitshalo zezitshalo. Imikhiqizo enjalo ayilimazi izindawo zayo zokuphulukisa, kodwa izobaqinisa kuphela. Ngakho ngezipikili zakho - lokhu kuzoba yisinqumo esihle.
I-Wax yezipikili - ividiyo
Kunokuba uhlaziye i-varnish ngeminwe noma ngezipikili uma eye waqina?
Indlela yokwenza i-pedicure ekhaya?
Umuthi womnyaka omusha ka-2013
Ukukhishwa okuphuzi ngemva kokubeletha
Collection of zokupheka for izitsha zokudla kazwelonke
Izihloko zonyaka omusha 2018 enkulisa kanye nesikole ngezandla zabo ezenziwe ngephepha, uzizwa, izigaxa
Ikhwalithi esiza ukuphumelela
Isobho le-Puree namazambane ahlambulukile
Isaladi esisha ne-saumon
Imifino enamanzi enewayini elibomvu ne-nutmeg
Izindlela zokupheka ezinhle kakhulu zoNyaka Omusha wezi-2016, zokupheka nezithombe
Umfana angayicela kanjani
Love horoscope wesifazane aquarius
Inyosi ekhonjiwe in recipe yesiNgisi
I-asparagus ubhontshisi ebusika